XOG:M/Farmajo Iyo Fahad Yaasin Oo Bixiyay Goankii Lagu Weerari lahaa Shariif Iyo Siyasiyin kale -
HomeArimaha bulshadaXOG:M/Farmajo Iyo Fahad Yaasin Oo Bixiyay Goankii Lagu Weerari lahaa Shariif Iyo Siyasiyin kale
XOG:M/Farmajo Iyo Fahad Yaasin Oo Bixiyay Goankii Lagu Weerari lahaa Shariif Iyo Siyasiyin kale
March 24, 2020 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Sida la Xaqiijiyay Madaxtooyada Soomaaliya iyo NISA in uusoo dhamaaday qiimeen ay dhawaan waday NISA taaso ah sida loo weerarayo Hoyga Madaxweyne Shariif Shiekh Ahmed iyo sida looga hortagi karo hadii uu dagaal ka dhasho weerarkaas,
Xog uruurintaas oo ay si wada jir u sameeyeen Taliyaha Sirdoonka Caasimada Ciise Mohamed Ciise iyo laba nin ee Cabdirisaaq Jaamac oo ah Gacanta Midig ee Fahad Yaasiin isla markaasna ku magacaaban Waaxda Howlaha Gaarka NISA, iyo Abdullahi Kulane Jiis Mareexaan.
Sida la xaqiijiyay warbixinta ay soo diyaariyeen NISA waxaa loo gudbiyay Madaxweyne Farmaajo wuxuuna la tashi ugu yeeray RW Khayre iyo Wasiirka Amniga Qaranka Isloow loona sheegay inay tahay arrin ammaanka lagu ilaalinayo.
Dood dheer kadib, waxaa la isla gartay in Howlgalkaas ay fuliyaan Saraakiil Mudullod ah, sidoo kalena la xiro xuduudaha Magaalada Muqdisho, dhaqanka iyo siyaasiinta Beesha oo ay ugu horeeyaan Abdullahi Shiekh Hassan, Ali Mohamed Geedi, Salaad Cali Jeele , Cumar Finish iyo qaar kamid ah oday dhaqameyada beesha, gaar ahaan mudulloodka in ay taagaan idaacadaha weerarka kadib si loo dajiyo xasarada lafilan karo iney ka dhalan karto haddii la weeraro Madaxweyne Shariif Shiekh Ahmed.
Sido kale waxaa dood dheer oo laga yeeshay Madaxweyne Shariif in lagu khaarijiyo Howlgalkaas iyo in lagu soo xiro, waxaana la isla gartay in la soo xiro laakiin uu ku dhaawacmi karo weerarka inta uu socdo.
Hadii kale aan ku qal qal gelino in Ciidan la dhigo Gurigiisa Hortiisa Si looga Xanibo siyasiyiinta la kulmeeysa Hogaamiyaha Axsaabta Siyaasada Madasha qaran. hadii aan ka go,doomino siyaasiyiinta asiga ayaa ka cararay dalka .
Haddii uu fulo weerarkaas isla markaasna sida qorshaha yahay lagu guuleysto halkaas waxaa dhici doonta in Siyaasi ka soo horjeeda Taliska Digtatoorka ee Farmaajo uusan jirin Siyaasigii Madaxa soot aaga ama ka hadla waxa socda iyo dhibta Bulshada somaliyeed lagu haayo in la qaarajiyo taaso ay ugu horeeyso.
Magaalada Muqdisho aan laheen Matalaad Siyaasadeed iyo cid wax u tiraahda.
Xabsiyada Dowlada oo ay buux dhaafiyeen dadka Dowlada ka aragtida Duwan ee kasoo jeeda beelaha somaliyeed gaar ahaan Beesha mudulloodka.
Dhaqaalaha kasoo xarooda Muqdisho in lagu hormarinayo Gobollo kale .
In aysan jirin Maamul goboleed ay leeyihin Dadka ku nool Gobolka Banaadir.
Saraakiisha Ciidamada Sida Qabiilada Ka Soo Horjeeda in lakala diray oo laga reebtay inta dabadhilif ka ah ama lagu fushado dano ah in lagu laayo dadkooda.
Shaqaalaha Rayidka dowlada in lagu sameeyo heeb sooc sida kan Waa Reer Hebel ee hanooso dhaweyn iwm, tasso dhaxalsiisay shaqalaha qaar in aan loo dirin siminaarada dibada, fursad walbo looga faaideyo beelaha kale. ee taagersan Xakunkaa Fashilka ah loo diro.
Si kastaba Ha ahaatee hab dhaqanka uu la soo baxay madaxweyne farmaajo ayaa ah mid uu ka dhaxlay kaligii taliyahii maxamed siyaad Bare kaas oo u horseday bur burka soo gaaray dadka iyo dalka somaliyed, balse dadka somaliyed ayaa ah kuwa aan ka yeelin waxa uu wado farmaajo Iyo Kooxda uu Horkacayo waxaana laga dhaxli donaa cawaaqib ka daran tii laga dhaxlay maxamed siyad bare,